ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: May 2008
မး။ ။ ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ အခုလက်ရှိကာလအထိ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြပါ။
ဒီတိုက်ပွဲက နိုင်ဖို့သိပ်မလွယ်ဘူး ”
ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းဟာ ဟစ်တလာရဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတစ်ယောက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
၀ါတာလူးစစ်ပွဲကို ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်လိုက်တာပါ ။ ဒါကိုဟစ်တလာကကြားတော့ ဒီစကားဟာအန္တရယ်ရှိတယ် ။ ဒီစကားကိုသာ စစ်သားတွေကြားသွားရင် ဆိုက်ကော်လော်ဂျီ နည်းအရ အများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တယ် ။ ဒီလိုယူဆတယ် ၊ ဒါကြောင့်အဲဒီ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးကို ခေါ်ပြီးသေမိန့်ပေးလိုက်တယ် ။ မင်းဖာသာမင်းသတ်မလား ၊ ငါသတ်ရမလား ၊ မင်းဖာသာမင်းသတ်ရင် သူရဲကောင်းဗိမ္ဗာန် မှာထားမယ် ၊ ငါသတ်လို့သေရင် သူရဲကြောင်စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်မယ် ။
အဲဒီဗိုလ်ချူပ်ကြီးကလည်း သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင် လိုက်တယ် ၊ ၀ါတာလူးမှာ ဟစ်တလာလည်းရှုံးခဲ့ရတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဟစ်တလာရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီစကားကြောင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ကျဆင်းပြီး ရှုံးသွားရတာလို့ မတွေးဘူးလို့ ဘယ်သူပြောမလဲ ။ တော်လှန်ရေးဟာ ဟစ်တလာလောက် ရှုးသွပ်မှရလိမ့်မယ် ။
၂၀၀၈ တာ့ဂတ်တော်လှန်ရေး ဟာ Now or Never ဖြစ်နေပါတယ် ။ န.အ.ဖ စစ်အစိုးရဟာ တဖြည်းဖြည်းဆေးယဉ်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်) နဲ့တူတူလာပါတယ် ။ ရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင် ကျနော်တို့ မကုခဲ့ကြ ၊ မကုနိုင်ခဲ့ကြသေးဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ အရေးအခင်း တစ်ခုပြီးတိုင်း ကျနော်တို့ကပဲ န.အ.ဖ ကိုသင်ခန်းစာ တစ်ခုထပ်သင်ပေး လိုက်သလိုဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ် ။
၂၀၀၈ ဟာအနိုင်တိုက်ရမဲ့ နှစ်ဖြစ်တယ် ။
ကဲ………. ဒါဆိုဘာလုပ်ကြမှာလဲ ။
န.အ.ဖ ကိုတိုက်ဖို့လူတိုင်း သိတဲ့စစ်မြေပြင် သုံးကွင်းရှိတယ် ။
၁ ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး
၂ ။ လူထုအုံကြွမှုနဲ့ တော်လှန်ရေး
၃ ။ ပြည်ပ အကူအညီနဲ့ ပြည်ပဖိအားနဲ့ ဒီပလိုမက်တစ်နည်းအရ တော်လှန်ရေး ။
“ တော်လှန်ရေး ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အသေအပျောက် စာရင်းဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိပါတယ် ။ သေလည်းသေခဲ့ ကြပြီးပြီ ထပ်ဖြစ်ရင် ထပ်သေကြဦးမယ် ၊ ဒါကစကားအလှ သုံးစရာ မလို ၊ ဖုံးစရာမလိုတဲ့ အမှန်တရားပါပဲ ။ ဆက်ဖတ်ရန် အပြည့်အစုံ ကို Click နှိပ်ပါ။
အခု….. ကျနော်ဆွေးနွေးမဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ပုဂ္ဂလိကအတွေး ပါမှန်နိုင် ၊ မှားနိုင်ပါတယ် ။
နံပါတ် ( ၃ ) ဖြစ်တဲ့ ဒီပလိုမက်တစ်နည်းကို အသာထားပြီး ( ၁ ) နဲ့ ( ၂ ) ကိုအရင်ဆွေးနွေး ပါ့မယ် ။
၁ ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မယ် ။ ဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာ ဒါတွေပါဝင်လာနိုင်တယ် ။
(က) ပြောက်ကျားစနစ် စနိုက်ပါတွေနဲ့ တိုက်မယ် ။
(ခ) အသေခံဗုံးခွဲမယ် ။
(ဂ) ထိပ်တိုက်စစ်မျက်နှာ ဖွင့်မယ် ။
ပြောက်ကျားစနစ် နဲ့စနိုက်ပါပဲသုံးသုံး ၊ အသေခံဗုံးပဲခွဲခွဲ န.အ.ဖ ကိုဇာတ်သိမ်းပေး လောက်အောင်အထိ အားမကောင်းနိုင်ဘူး ။ ဒါဆိုထိပ်တိုက် စစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့် တိုက်မယ် ။ နိုင်နိုင်မလား ၊ ဒီအစီအစဉ်ဟာ န.အ.ဖ ကိုဇာတ်သိမ်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးပဲ ။
ခင်ဗျားသာ ဟစ်တလာဆိုရင် ကျနော့်ကိုလာသတ်လှည့်ပါ ။ ကျနော်တို့လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းဟာ န.အ.ဖ ဘီလူးတပ်လောက် အင်အားမတောင့်တင်းဘူး ။
• လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်က ပြည်သူလူထုကြီး ပါဝင်ဆင်နွဲ ခွင့်မရခြင်းပါပဲ ။
• စကားပြောကောင်း စည်းရုံးရေးကောင်း သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ( အပြည့်အ၀ ) အသုံးချခွင့် မရခြင်းပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ် ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ န.အ.ဖ ကိုချည့်နဲ့စေနိုင်ပါတယ် ။ ပုဂ္ဂလိက အမြင်အရ အသေခံဗုံးခွဲတာကို တော့ဖယ်ထားခဲ့ချင်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး လုပ်ရမဲ့ အလုပ်က လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတိုင်းက တပြိုင်ထဲ၊ တစ်ရက်ထဲ န.အ.ဖ ကို စစ်ကြေငြာ လိုက်ဖို့ ပါ။
အားလုံးစုစည်းပြီး တိုက်စရာမလိုပါဘူး၊ ကိုယ့်စစ်မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ဖွင့်ပြီးတိုက်ဖို့ပါ။ စစ်မျက်နှာတွေအများကြီးဖွင့်လိုက်ရတဲ့အတွက် န.အ.ဖ စစ်တပ်ဟာလည်း ခွဲပြီး စစ်ဆင် ရပါလိမ့်မယ်။
နယ်စပ် စစ်ဆင်ရေးတွေကို မဲနေချိန်မှာ လူထုကြားထဲက စနိုက်ပါ တွေက ထပ်ပြီး ပြဿနာရှာဖို့ ပါ။ သန်းရွှေသေမှ မောင်အေး သေမှရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အပွင့်ကြီးကြီး အစိမ်းရောင် ကောင် တစ်ကောင်ကျတယ်ဆိုရင်ပဲ သူတို့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ခြောက်ခြားလာမှာပါ။ ရက်စက်လွန်းတယ်လို့ မထင်ရင် ဒီအခြေအနေတွေမှာ အသေခံဗုံးခွဲမှူတွေ ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။
-ရှေ့ တန်းအတွက် အမျိုးမျိုးသောစစ်မျက်နှာ
-ကြို့ ကြား၊ ကြို့ ကြား စနိုက်ပါ အန္တရယ်၊
-ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကျအရှူံးစာရင်း၊
ဟုတ်ပြီ လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတိုင်းက တပြိုင်နက်ထဲ စစ်မျက်နှာ အသီးသီးက စစ်ကြေငြာ လိုက်ကြပြီ။ စနိုက်ပါ တစ်ချို့ က ကြို ကြား ကြိုကြား လက်စွမ်းပြနေပြီ၊ ဒီအခြေအနေမှာ/ န.အ.ဖ ခေါင်းမီးတောက်နေချိန်မှာ-
လူ ထု အုံ ကြွ မှူ စတင်ရမယ်။
ဒီ လူ ထု အုံ ကြွ မှု ကို N L D နဲ့ သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ရမယ်။
လူထုအုံကြွမှု ရဲ့ နောက်မှာ စနိုက်ပါတွေ၊ ဂျင်ကလိတွေ၊ နှစ်ဖက်ဓားသွားတွေ ရှိနေရမယ်။
စနိုက်ပါရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ကြံ့ဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင် ဆိုတဲ့ ဘီလူးလက်ပါးစေတချို့ ကို သိုသိုသိပ်သိပ် လက်စ ဖျောက်ပစ်ဖို့ ပါ။ အားလုံးကို လက်စဖျောက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီကောင်တွေက အူကြောင်ကြား တွေဆို တော့ ကျန်တဲ့လူတချို့ က ကိုယ့်အင်အားတောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သုံး ရမဲ့ဗျူဟာက ကိုယ်ကသူ့ကိုကြောက်နေရမဲ့အစား ၊ ကိုယ့်ကိုသူကကြောက်နေရအောင် ဗျူဟာပြောင်းပစ်လိုက် ရမယ် ။
ကြံဖွတ်နဲ့စွမ်းအားရှင် တစ်ချို့ကိုလက်စဖျောက် လိုက်ပီဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ကို သူတို့ကစတင်ကြောက်ရွံ့ လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် လူထု အုံကြွမှူရဲ့နောက်ကွယ်မှာ စနိုက်ပါတွေရှိရမယ်၊ ဂျင်ကလိတွေရှိရမယ်။ စနိုက်ပါတွေရဲ့တာ့ဂက် က သန်းရွှေ မဟုတ်၊ မောင်အေး မဟုတ်ပါ၊ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ ကြံ့ ဖွတ် (တိကျရပါမယ်) တချို့သာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ပါးစေတွေမရှိရင် လူထုအုံကြွမှူဟာ အရှိန်ကောင်း ကောင်းနဲ့ချီတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
* အရေးကြီးတာက လူထု အုံကြွမှူကြီးအားကောင်းလာချိန်မှာ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာတွေကလည်း အရှိန်မြှင့်နေဖို့ ပါ။
* န.အ.ဖ ကို ချည့်နဲ့ အောင် သာတိုက်ပြီး မြို့ ပြတွေကိုတော့လူထုအုံကြွမှူနဲ့ ပဲ သိမ်းပိုက်ပါစေ။
ဒီအစီအစဉ်တွေ အထမြောက်ဖို့လူနဲ့ ငွေ လိုပါတယ်။ လူရှိသူက လူပေးပြီး ငွေရှိသူက ငွေပေးရပါလိမ့် မယ်။ ဖြစ်နိ်ုင်ရင်နှစ်မျိုးလုံး လည်း ပေးရပါလိမ့်မယ်။
လူထုဆီက ကြံ့ ဖွတ် တွေရဲ့ သတင်း အချက်အလက်နဲ့သွားလာ ကျက်စားတတ်တဲ့နေရာတွေ သိထားရပါမယ်။
ဒါဆို လူထု အုံကြွမှူနဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် ပြောချင်တာက လူထုကြီးမပါသေး သရွေ့ ၊ ၀န်ထမ်းတွေ မပါဝင်သေးသရွေ့န.အ.ဖ ကို ဖြုတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်ဆုံးဖြစ်လှ သန်းရွှေ ကနေ ရွှေမန်း ပြောင်းတာလောက် ပါပဲ။ ဒီလောက်အထိ လူထုနဲ့လွတ်လပ်ရေး တပ်သားတွေက လုပ်နိုင်ရင် ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ နိုင်ငံရေးပါတီများ အတွက်ချန်ထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူထုကြီးပါဝင်လာရဲဖို့အခွင့် အလမ်းတွေရအောင်တော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ကျောင်းသား၊ ရဟန်းသံဃာ တွေက စတင်ဖန်တီးပေးရပါမယ်။
အုံကြွလာတဲ့ လူထုကို ထိန်းဖို့ဒေါ်စု ရှိပါတယ်၊ မင်းကိုနိုင် ရှိပါတယ်၊ သာသနာ့ မောဠိကဆရာတော်ကြီး နှစ်ပါးရှိပါတယ်။
အတ္တကိုရှေ့ တင်ပြီး ဘယ်သူမှ လူထုရှေ့ ကိုတက်မလာသင့်ပါဘူး၊ နေရှင်းဝိုက်(ဒ်) ဂလိုဘယ်လိုက် (ဇ်) လေးစားမှူက သူတို့ ဆီမှာပဲရှိပါတယ်။
သူတို့ငြိမ်းမှ လူထုငြိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၁။ ရှေ့ တန်း စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်၊ စစ်ကြေငြာ
၃။ ကြံ့ ဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင် ကို စနိုက်ပါ ၊ ဂျင်ကလိ နဲ့ ရှင်း
၄။ လူထုကြီးတရပ်လုံး ပါဝင်ရဲ လာအောင် ရှေ့ က အနစ်နာခံ ဦးဆောင်
၅။ ခေါင်းဆောင်တွေ အချင်းချင်း အဆက်အသွယ်လုပ်၊ အစီအစဉ် အတိုင်းရှေ့ တက်
၆။ နယ်စပ် နဲ့ပြည်တွင်း ဟန်ချက် ညီညီလှုပ်ရှား
၇။ ပြည်သူကို ထိမ်းဖို့မောဠိ ဆရာတော်ကြီး နှစ်ပါး၊ ဒေါ်စု နဲ့မင်းကိုနိုင် တို့ ရှေ့ တက်လာပါ
“ခင်ဗျားသာ ဟစ်တလာ ဆို ရင် ကျနော့် ကို လာသတ်လှည့်ပါ။”
“လက်နက် နဲ့ တိုက်ယုံနဲ့န.အ.ဖ ကို ဖြုတ်မချ နိုင်ပါ”
“ကျနော် သာ ဟစ်တလာဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ကို သူရဲကောင်း ဗိမ္ဗာန် ထဲ ထည့်ခွင့်ပြုပါ”။
Posted by Ashin dhamma at 2:47 AM0comments
အိမ်တစ်ခုလုံးကို ရစ်ပါတ်လို့ ....။
ဒီအိမ်ထဲကဘဲ နှိပ်စက်လို့ သေကြရမှာပါ..။
သစ္စာဖောက်တွေ လုယူထားတဲ့ အိမ်။ ။
Posted by Ashin dhamma at 2:14 AM0comments
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အနဲဆုံးအနေနဲ့ နအဖက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားတဲ့ လူဦးရေတောင်မှ သောင်းနဲ့ ချီပြီး သေ ကြေ၊ ဒဏ်ရာရ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ရတာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာက ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာကို တွယ်တာနေမှာလဲ။ ဂုဏ်တွေလား၊ ပကာသနတွေလား၊ ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ သာမာန် ရိုးရိုး လူသားတွေ၊ လောကီမှာ ကျင်လည် နေကျတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချက်တွေဟာ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မငြင်းပါဘူး....။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဂုဏ်တွေ၊ ငွေတွေ ပကာသနတွေအတွက် လူအများစုကြီး ဒုက္ခရောက်ပြီးမှ တကယ်တမ်း အဆင်ပြေနေတဲ့ လူနည်းစု ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အောက်ဆွဲပြီး မိမိရဲ့အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်မှာလား၊ တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့သန်းငါးဆယ် ကျော်တဲ့ ပြည်သူ လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံး ကို မတရား ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ လူနည်းစု ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အပေါင်းအပါ အင်အား စုစုပေါင်းတောင်မှ တစ်သိန်းမပြည့်ပါဘူး.....။ သူတို့ တွေဟာ ကျွန်တော်တို့လို လူသာမန်တွေပါပဲ...။ ဒါပေမယ့် သူတို့အခွင့်ထူးတွေ ခံစားနေကြတယ်...။ အဲဒီလို ခံစားတဲ့နေရာမှာလဲ အားလုံး က သဘောတူ ကြည်ဖြူလို့ သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ် ဆိုပြီး ဂုဏ်ပြု ချီးမြှောက်ထားလို့ ဆိုရင် တစ်မျိုးတစ်ဘာသာပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာအတွက်ကြောင့် ခေါင်းငုံ့ခံပြီး သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာ၊ ဂုတ်သွေး စုတ်နေတာတွေကို လိုက်ပြီး ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်၊ မသိချင် ယောင်ဆောင် နေမှာလဲ....။ အဓိကအနေနဲ့တော့ တပ်မတော်သား ညီအကိုတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အတူ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ညီအကိုတို့ အားလုံးဆိုခဲ့ရတဲ့ သစ္စာ၊ အဓိဌါန်လေးချက်ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဆင်ခြင်ပြီး ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးသား လုံးရဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ပြည်သူ့ စစ်သားကောင်းတွေ အဖြစ် လုပ်ပြပြီး သမိုင်းကိုရေးဖို့ လုပ်ကြ စေချင်ပါ တယ်...။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဘယ်လိုမဆို တစ်နေ့ မြေကြီးထဲကို ရောက်ရမှာပါပဲ...။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေ ရဲ့အမိန့်ကို နာခံပြီး သံဃာပါမချန် သတ်ဖြတ်ပြနေမှာလဲ ညီအကိုတို့ ... အခုကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိသွားပါပြီ...ဒီလို သိလာတာကလည်း အင်မတန်မှ ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမျိုးဟာ ဘုရားရဲ့ သားတော်တွေကိုပါ သတ်ဖြတ်ပြလိုက်လို့ ပါ...။ ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို သဘာဝတရားကြီးက သတိပေးလိုက်လို့ပါပဲ...။ မြေကြီးထဲကို ရောက်ကို ရောက်ရမယ့် အတူ တူ မင်းတို့ ကောင်တွေ ဘာလို့ ငုံ့ခံနေမှာလဲ...။ ငုံ့ခံလို့ ဘာအကျိုး ဖြစ်ထွန်းလာမှာလဲ ဆိုပြီး မြေကြီးထဲ ရောက်တဲ့ ဥပမာတစ်ခုကို ပေး လိုက်တာ ချက်ချင်းလက်ငင်းပါပဲ...။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဂုဏ်သော်၎င်း၊ ငွေပကာသ နသော်၎င်း၊ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ကြောင့်သော်၎င်း၊ တစ်မျိုးသားလုံး စစ်ကျွန်ဘ၀ ရောက်နေတာကို မသိချင် ယောင်ဆောင်မှာလား၊ ဒါမှမ ဟုတ် ဖော်လိုလိုက် နေမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မနိုင်သေးလို့ဆိုပြီး ငုံ့ခံနေမှာလား။
ဒီနအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အခုဆိုရင် အင်မတန်မှပဲ ရေရှည်အတွက် တိုင်းပြည်ကို ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်မလာအောင် အခြေခံဥပ ဒေကိုပါ သူတို့ ထိခိုက်လာပါပြီ။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ကို ချွတ်ချုံ ကျသထက်ကျပြီး ကမ္ဘာမပြောနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေမှာတောင် ဘယ်အပိုင်းကမှ မ၀င်ဆန့်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီထက် ပိုဆိုးတာက လူတွေမှာ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပီး ရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်း အစဉ်အလာက အဲဒီလို ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဒီနေ့မှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒီအချက်ကို သတိရှိရှိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးစဉ် ဆက်တွေ ရေရှည်မှာ ကောင်းမွန်ဖို့ တကယ့် အခြေခံကျတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီကမှ တဆင့် ဒီထက် ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ် ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီဆိုလဲ ဆိုရှယ်ဒီမိုကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
မင်းပြစ် မင်းဒဏ်သင့်မှာ ကြောက်လို့ မလုပ်ဖူးဆိုတာမျိုးကတော့ ဒီလို အစိုးရလက်အောက်မှာပဲ နေရမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြောက်နေကြမှာလား...။ ဗမာပြည်သား တိုင်းရင်းသားတွေ တစ်ဦးချင်းစီကို လိုက်မေးကြည့်ရင် ကြောက်ပါတယ်လို့ ဖြေမယ့်လူက မရှိ သလောက်ရှားမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကမ္ဘာပြည်သား တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးလဲ မကြောက်ဖူးလို့ပဲ ယေဘူယျ သတ်မှတ်ရမှာပါပဲ။
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ မကြောက်တာမှန်ရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ နောင်လာ နောင်သားတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီနအဖ ကိုပြုတ်ကျတဲ့အထိ ဆော်ပြနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ တစ်ချိန်တုန်းက ဒီလောကထဲကို မ၀င်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရှက်လာ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့.. ဥပမာ.. မနီလာသိန်းတို့လို မိန်းကလေးတွေတောင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ကျွန်တော်တို့ လူ မျိုးအတွက် ရေရှည်ကောင်းဖို့ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာ ခံပြနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျား ရင့်မာကြီးတွေက ကိုယ့်လူ မျိုး အချင်းချင်းထပြီး တစ်ဦးချင်းဆီမှာ ဓါးနဲ့ ခုတ်ထိုး သတ်ဖြတ်ဖို့ကျတော့ ၀န်မလေးကြပဲ နိုင်ငံအပေါ်မှာ ကျတော့ ကြောက်ပြ နေတယ် ဆိုရင် မလေးရှားက ကိုကျော်ကျော်တို့ရဲ့ပွဲကလို ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ထမိန်ဝတ်ပေးပြီး သနပ်ခါး ပါးကွက် ကွက်ထား လိုက်တာက ပိုကောင်း မှာပါ။ ဒါတောင် အမှန်အကန် မိန်းမမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ မနီလာသိန်းတို့က ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးကို ပျင်းတယ်လို့ မျက်လုံးချင်း ဆိုင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးလေး ပြောသွားမှာပါ။
လောလောဆယ်ကတော့ သဘာဝတရားကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါပြီ..။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပေးလိုက်ရတဲ့ တန်ဖိုးကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဟာတွေအားလုံးပါပဲ..။ လူတွေမှာ လေနဲနဲ တိုက်လာရင်တောင် နေစရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ် မှ ကိုယ်ရမှာပါ..။ ဘယ်လို အမေကိုမှ ကျော်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဒွေးတော်ကို လွမ်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး..။ကုလ.. အမေရိက..ဂြိုလ် သား ဘာကိုမှ လွမ်းနေလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ညီညာစွာနဲ့ နအဖကို ဆော်ရရင် ကောင်းမယ်ဗျာ...။ ဒီအတွက် ခင်ဗျား တို့လို ပြည်ထောင်စုရဲ့ တပ်မတော်သား အမှန်အကန်တွေကိုပဲ လိုအပ် နေပါတယ်။ သဘာဝ တရားကြီးက ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမယ် ဆို ပြီး သတိပေး၊ ဒဏ်ခတ် ပြလိုက်ပြီး တာဝန် ကျေပြလိုက်ပါပြီ။ ဒီအတွက် ဘာတွေ ပေးဆပ်လိုက်ရလဲ...။ ပေးဆပ်မှု မရှိပဲ ဘာမှ မရနိုင်ပါ ဘူး....။ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ပေးဆပ်ကြမယ်ဗျာ...။ ။
Posted by Ashin dhamma at 2:09 AM0comments
ဒီပဲယင်းတိုက်ခိုက်မှု သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်အမိန့်ပေး မြန်မာသံအရာရှိဟောင်းပြော
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလကုန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင်က အမိန့်ပေး ညွန်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ သံတမန် အရာရှိဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကို ရထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းနဲ့ လူရမ်းကားတွေကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးတို့ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကားတန်းကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် မိုလို့ လူ ၇၀ ထက်မနဲ သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ အတိုက်အခံ အဖွဲ့ဝင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် ပြောကြားချက်ကို ဗီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ အမဲစက် ထင်ကျန်ရစ်စေမယ့် သွေးစွန်းတဲ့ နေ့ရက်တစ်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ အထက် မြန်မာပြည်ဘက်မှာ နယ်လှည့်စည်းရုံးရေးခရီး ထွက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို ဒီပဲယင်းမြို့နယ်အတွင်း ညမှောင်မှိတ်ချိန်မှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ လူရမ်းကားတွေပါ ၀ိုင်းပြီး ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီမတိုင်ခင် ရက်တွေမှာလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တလျှောက် ဒီလူစုတွေရဲ့ သဲသဲမဲမဲ လိုက်နောက်ယှက်မှုတွေ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဒီလောက်ထိတော့ သွေးချောင်းစီး တိုက်ခိုက်မှုကို ကျူးလွန်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မထင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့်ကို ရက်ရက်စက်စက် စီမံလုပ်ကြံမှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ မြန်မာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်းနဲ့ သံတမန်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်က ဗီအိုအေကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“အမှန်တိုင်း ပြောရရင်တော့ သူတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အသေ လုပ်ကြံတာပဲခင်ဗျ။ ကျနော် သိသလောက်ပေါ့လေ။ နောက်ပိုင်း ကျနော်တို့ ပြန်ပြောကြတဲ့ အခါမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကံကောင်းတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားဟာ ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်ပြီးတော့မှ နောက်ဆုံး သူ့ကားက မောင်းပြီးတော့မှ ပြေးပြီး ထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ သိရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ရဲစခန်းတစ်ခုမှာ သွားပြီးတော့ သတင်းပို့တယ်လို့ ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ ရဲစခန်း ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဆွယ်က လူတွေက နေပြီးတော့ သတင်းပို့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အန္တရာယ် ရှိတာနဲ့ ရဲစခန်းကနေပြီးတော့မှ တနေရာကို ရွှေ့တယ်လို့ ကျနော်တို့ သိတယ်။ တပ်ကို ရွှေ့တယ်လို့ သိတယ်။ ကျနော် သိသလောက်ပေါ့နော်။ အဲဒီ တပ်ထဲကျမှ ကျနော်တို့ မိထ္ထီလာ လေတပ်က တပ်လေယာဉ်တွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ညတွင်းချင်းပဲ ရွှေ့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှ ကျနောတို့ သိပါတယ်။”
ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုမှာ လူပေါင်း ၇၀ ထက်မနဲ သေဆုံးပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေရဲ့ စုံစမ်း ထွက်ဆိုချက်တွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ကတော့ သေဆုံးသူ ၄ ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်လို့ ကနဦး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် တရားဝင် အရေးယူစုံစမ်းမှုတွေလည်း အခုချိန်ထိ လုပ်မလာခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တမ်းမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အထက်က ညွှန်ကြားချက်အမိန့်နဲ့ အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်က အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ဦးစီးတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ လူရမ်းကားတွေ တဖြည်းဖြည်း အတင့်ရဲ ကြမ်းတမ်းလာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို တိုက်ခိုက်မယ့်အဆင့်ထိ ရောက်လာနေတာကို နယ်မြေခံစစ်တပ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကတောင် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်လာရပြီး အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် ရုံးကို အကြောင်းကြားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်နဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံကို သွားရောက်ပြီး သတင်းပို့ မေးမြန်းခဲ့တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဒါဟာ သူကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားထားတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ပြောပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်ကနေပြီးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အခြေအနေ ဒီလိုဖြစ်တယ် ဆိုပြီး သူ ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ - အေး ဘာဖြစ်လဲကွာ ငါ ခိုင်းထားတာ ဆိုပြီးတော့မှ သူက အဲဒီလို ပြန်ပြောပါတယ်။ ပြန်ပြောတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်က ဘာထပ်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၊ အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အားလုံး ရှုပ်ထွေးကုန်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရော၊ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေပိုင်းမှာပါ အားလုံးက ရှုပ်ပြီးတော့ ရှင်းမရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို ပြောပါတယ်။ ပြောတော့အခါကျတော့ ဒီအဘိုးကြီးက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ - အေး အဲဒါဆိုလည်း မင်းတို့ဘာသာ မင်းတို့ ကြည်လုပ်ကြပေါ့ကွာ ဆိုပြီးတော့မှ ပြောပြီးတော့မှ အဲဒီ စကားပြောတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော် သိရပါတယ်ခင်ဗျ။”
မြန်မာစစ်တပ်မှာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အမိန်ကိုပဲ နာခံတဲ့ လက်အောက်ခံ အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ သူ့ရဲ့ တိုက်ရိုက်အမိန့်ကို ရထားတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုကို ကျန်တဲ့အရာရှိကြီးတွေလည်း ဟန့်တားဖို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကို ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်က ထပ်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ကော်မရှင် အဖွဲ့တစ်ခု စုံစမ်းပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုမှန်တွေ ပေါ်လာမှာတော့ မလွဲပါဘူး။
မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးကနေ နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ သံမှူးကြီး အဖြစ်ကနေ နိုင်ငံရေး ခိုလုံခဲ့သူဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းအကြောင်း ကြားသိရသမျှ ပြန်ပြောင်းပြောပြချက် အသေးစိတ်ကို တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေးရာကဏ္ဍမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒေသများတွင် ကျောင်းများ ပျက်စီးကြသဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ ကျောင်းသားလူငယ် ဦးရေမှာ ၁ ဒဿမ ၁ သန်း ရှိသည်ဟု အစိုးရ ကိန်းဂဏန်းများက ဆိုသည်။ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပျက်စီးသွားသော အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၄၁၀၆ ကျောင်း ရှိသည့်အနက် လုံးဝ ပျက်စီးသွားသော ကျောင်း ၁၂၅၅ ရှိကာ၊ ၈၀၄ ကျောင်းမှာ ဆိုးဝါးစွာ ပျက်စီးသွားသလို၊ ၁၉၉၆ ကျောင်းမှာမူ အမိုးများ ပျက်သွားသဖြင့် ကျောင်းသားများ ယခုလို ပညာသင်ကြားရေး ထိခိုက်ကြရသည်။
“ကျနော်တို့ မြို့ပေါ်မှာက အထက ကျောင်း ၂ ကျောင်းကပဲ အမိုးလန်သွားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါတော့ လူကြီးတွေ လာကြည့်တော့ ပြင်ပြီးသွားပြီ။ တခြား မူလတန်း ကျောင်းလေးတွေဆိုရင် ကျောင်းဆောင်တခုလုံး ပြိုသွားတာ ရှိတယ်။ အနီးအနားက ရွာတွေဆိုရင် ဘာမှကို မကျန်တော့တာတွေ ရှိတယ်” ဟု ဘိုကလေး မြို့ခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကျမကလေးတွေကို ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်စေချင်လို့ ကြိုးစားပြီး ကျောင်းထားခဲ့တယ်။ အခုက ကျောင်းကလည်း ပျက်နေပြီ။ ကျမတို့ အိမ်လည်း မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ကလေးတွေကို ကျောင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။ ကလေးတွေက ကျောင်းတက်ချင်ကြတယ်” ဟု ဘိုကလေးမ ကျောင်းသားမိဘ တဦးက ပြောသည်။
“သူများတွေက ကျောင်းအပ်နေရပြီလေ။ သမီးက မအပ်ရသေးဘူး။ စိတ်မကောင်းဘူး။ သမီးက ဒီနှစ် ၁၀ တန်းတက်မှာ၊ ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွဲ ယူထားတယ်။ အဖေတို့က မရှိတဲ့ ကြားက မြို့မှာ ကျောင်းထားပေးထားတော့ ကြိုးစားပါတယ်။ အခုကတော့ အိမ်တောင် မရှိတော့ဘူး။ ကျောင်းတက်ရဖို့ကတော့ သမီးရဲ့ ကံတရားလို့ပဲ မှတ်ပါတယ်” ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ်အပိုင် အတွဲနှစ်ရွာမှ မညိုညိုက ပြောသည်။
“ဒီလို ထုတ်ပြန်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းက အရင် ကြေညာပြီးတဲ့ ဘေးဒဏ်သင့် ၇ မြို့နယ်ကိုပါ။ တလ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါတယ်” ဟု ပုသိမ်မြို့ တိုင်းပညာရေးရုံးမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
လေဘေးဒဏ်သင့်သူများ ဆန္ဒမပါဘဲ ရွာပြန်ခိုင်းခြင်း
လေးဖြူ ၊ မျိုးကြီး ၊ ဟယ်ရီလင်း ၊ R ဇာနည် ၊ L လွန်းဝါ ၊ တင်ဇာမော် ၊ ဇမ်နူး ၊ ဆုန်သင်းပါရ် ၊ ကြိုးကြာ နှင့် အခြားတေးသံရှင်များ မေတ္တာဖြင့်သီဆိုထားကြပါသည်
ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လို ခဏအချိန်လေးအတွင်းမှာ ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေ အဆုံးတိုင် ပျောက်ကွယ်ပြီလား
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှ ငါတို့ ဘဝဟာ မမြဲခြင်းတရားတဲ့လား
နှလုံးသားထဲမှာ ပွင့်ဝေဆဲမေတ္တာ ပေးအပ်ဖို့ရာ လက်ခံမယ့်သူရှိမလား
အန္တရာယ်ရေပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ အချစ်နဲ့ဘဝတွေ အဆုံးတိုင်ပျက်စီးသွား
(R ဇာနည်) စာနာမှုနဲ့ ဖေးကူမလား ဒီမြေပေါ် အတူကြီးပြင်း တို့သွေးရင်းပါ
မာယာအပြည့်နဲ့ မုန်တိုင်းအောက်မှာ တွဲလက်ဖြုတ်ကာ အဝေးဆုံးဝေးခဲ့ရ
အသက်ပျောက်ခဲ့ပြီ ငှက်ငယ်လေးများပမာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ မျောပါမြစ်ပြင်အနှံ့အပြား
သန်းခေါင်ယံညရဲ့ ဆုတောင်းများစွာ ပြည့်ဝခွင့်ဟာ အားလုံးရဲ့ အဖြေလား (အူး.. အားလုံးရဲ့အဖြေလား)
(လေးဖြူ) ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ တို့ဘဝတွေ အတူပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ် အနွေးထွေးဆုံးဒီအချစ်များနဲ့ အူး..
(မျိုးကြီး) ရင်ဆိုင်ကြဖို့ လက်တွေ အတူ.. တွဲထား အိုး ဘဝတွေ တစ်ခေါက်ပြန်လှစေဖို့ အတူတူဖြစ်စေရမယ် တို့ရဲ့လက်များနဲ့ (လက်များနဲ့)
မင်း.. အချစ်နဲ့လက်များ ပေးလိုက်ပေါ့ ဘဝများစွာ ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်တွေဟာ ကူညီသူကို စောင့်စား
အချစ်.. ကမ်းမယ့်လက်များ ဝမ်းနည်းမှု အိမ်ထဲ ကြေကွဲ ရေထဲ (အူး အချစ်နဲ့ဘဝတွေ နာကြင်ခြင်း)
အချစ်.. ကမ်းမယ့် (တို့လက်များ) လက်များ ဝမ်းနည်းမှု အိမ်ထဲ ကြေကွဲ ရေထဲ နာကြင်အဖေါ်မဲ့ ဘဝတွေ
Posted by Ashin dhamma at 10:18 PM0comments
Our Helping Hands to Burmese Nagis Survivors - Various Artists - Songs
Burma-Myanmar Disaster 2008
Posted by Ashin dhamma at 6:14 PM0comments
Cyclone Nargis Aftermath & Damage Rangoon Burma
Posted by Ashin dhamma at 6:10 PM0comments
ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း မဝေသည့် ရယကဥက္ကဋ္ဌအရိုက်ခံရ
Posted by Ashin dhamma at 7:49 AM0comments
အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ယခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံကြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ကျောင်း အများစုက မည့်သည့် အခကြေးငွေမျှ ဖြတ်တောက်ရယူခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် တချို့သော မြို့ ဆင်ခြေဖုံးကျောင်းများတွင် အခကြေးငွေတချို့ကို ကတိကဝတ်ဖြင့် ယူနေကြောင်း ကျောင်းသား မိဘများက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ အထက်တန်းကျောင်း တကျောင်းတွင် သားသမီး ၃ ဦးကို ကျောင်းအပ်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား မိဘ မိခင်တဦးက ကျောင်းသားတဦးလျင် ကျောင်းဝင်ကြး ၁၅၀၀ ကျပ်ကိုပေးခဲ့ရပြီး ကျောင်းဝတ်စုံ ဝယ်ယူရန်နှင့် နာဂစ် မုန်တိုင်း လေဘေးအတွက် အလှူငွေထည့်ရန် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများက ကတိကဝတ် ပြုခိုင်းသည်ဟု ပြောသည်။
yangon News မှတင်ပြသည်။
Posted by Ashin dhamma at 6:59 AM0comments
အင်တာနက်ပေါ်မှ အစိုးရခွင့်မပြုသော သတင်းစာမျက်နှာများနှင့် ဘလော့ (Blog) များကို ယခင်က ပရောက်စီ (proxy) နံပါတ်များ အသုံးပြုကျော်ဝင်ကာ ဖတ်နိုင်သော်လည်း ယနေ့မှစ၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ နှင့် အင်တာနက်ဆိုင် ဝန်ထမ်းများထံမှ သိရသည်။လက်ရှိ အင်တာနက် ပုံမှန် သုံးစွဲသူ တဦးက “ပရောက်စီနံပါတ် အခု ၂၀ လောက်ရှိတာ ၁ ခုပဲ စမ်းကြည့်ဖို့ ကျန်တော့တယ်။ စမ်းပြီးသမျှတွေ တခုမှမရဘူး။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုနေကျ freedom ပရောက်စီလည်း မရတော့ဘူး။ ဆိုင်တွေ အားလုံး စိတ်ညစ်နေကြတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြို့ပေါ်ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ပိတ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကို နယ်သို့သွားခွင့်မပြု
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက လေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများအားလုံးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံခြား ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကို သွားရောက်ခွင့်မပြုသည့်အတွက် ဒုက္ခသည်ပြည်သူများ အခက်အခဲ ကြုံနေရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ပေါ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများအားလုံးကို ယမန်နေ့က ပိတ်လိုက် ပြီးနောက် ငပုတောမြို့နယ်၊ ပျဉ်ခရိုင်ချောင်းဝသို့ သွားရောက်မည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ကယ်ဆယ် ရေးဆရာဝန်များအဖွဲ့ကို အာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုကြောင်း ပုသိမ်မြို့မှ ဆရာဝန်တဦးက ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မုန်တိုင်းကြောင့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဦးရေ (၁) သန်းခွဲ ရှိပြီး ဧရာဝတီတိုင်း လေးမြို့နယ်တွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဦးရေ (၇) သောင်း ကျော်ရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက မှန်းထားသည်။လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေး၊ မြောင်းမြ၊ ဖျာပုံ (၄) မြို့နယ်တွင် လပွတ္တာမှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဦးရေ (၃၄,၀၀၀) ရှိသည့်အတွက် စုစုပေါင်းလေးမြို့နယ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဦးရေ၏ (၄၈) ရာနှုန်း ရှိသည်။ ဒုတိယ အိုးမဲ့
အိမ်မဲ့ ဦးရေ အများဆုံးမှာ ဘိုကလေးဖြစ်ပြီး အဆိုပါမြို့တွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဦးရေ (၁၅,၅၀၀) ရှိသည်။
မော်ကျွန်းဆိုလျင် မုန်တိုင်းမတိုင်မီက လူဦးရေ (၃) သိန်းခွဲ ရှိသော်လည်း မုန်တိုင်းကြောင့် လူ
(၅) ထောင်နီးပါး သေပြီး (၈) သောင်းနီးပါး ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု (UNOCHA) က မှန်းထား သည်။ ငပုတောတွင် မြို့နယ်လူဦးရေ၏ (၄၆) ရာနှုန်း ဒုက္ခရောက်ပြီး အိမ်ခြေ (၄၉) ရာနှုန်း ပျက်စီးသည်ဟုပါ UNOCHA က ထုတ်ပြန်သည်။
န၀လီပေးပြီး အလုပ်ရှာပေးသည့်သဘော ဖြစ်သည်။
Posted by Ashin dhamma at 6:53 AM0comments
မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် မေလ ၂၅ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်း ၅၁ နိုင်ငံနှင့် ကုလ သမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည့် လေဘေးဒုက္ခသည်ကူညီရေး အလှူရှင်နိုင်ငံများ ကတိ ကဝတ်ပြု ညီလာခံနှင့် ပတ်သက်၍“မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဆီးအတားမရှိ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် Free Access ရမှ အကူအညီများ စို့စို့ပို့ပို့ ထပ်မံ ပေးအပ်မည်ဆိုသော အသံများကို ကြားရကြောင်း၊ ယင်း Free Access ဆိုသည့်စကားမှာ အိမ်ခြံဝင်းတံခါးမှ မီးဖိုချောင်တံခါးအထိ တံခါးအားလုံးကိုဖွင့်ပေးမှ ကျေနပ်မည့် အဆင့်မျိုးအထိ ရောက်သွားနိုင်၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by Ashin dhamma at 6:46 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 3:43 AM0comments
သူတို့က တခွန်းပဲ ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက ဘယ်ခေတ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ငတ်လို့ သေခဲ့တာ မရှိဘူး ဆိုတာ မှန်နိုင်ပါတယ် … တဲ့။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ စစ်အစိုးရသတ်လို့ သေခဲ့တာကတော့ အမှန်တရား ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မန်မာတွေ ငတ်လို့ မသေခဲ့ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေ သတ်လို့ မြန်မာတွေ သေခဲ့ကြရတာ ဧရာဝတီ သက်သေ ဖြစ်ပါကြောင်း …
“ဟော.. တနေ့က သတင်းတွေထဲမှာ ပလူပျံလို့..။ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို မဲပေါင်း ၉၂% နဲ့ ထောက်ခံအတည်ပြုတယ်..” တဲ့..။ ကျုပ်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ..။ ၉၂% တဲ့..။ ဟုတ်ရဲ့လား? ဒါ.. သက်သက် လိမ်တာ..။ ဒါ နိုင်ငံတော်ကို တမင် အပုတ်ချတာ..၊ စော်ကားတာ..။ ကျုပ်ကတော့ မယုံ ဘူး..၊ လုံးဝ မယုံဘူး..။
ကျုပ် ယုံတာက အနည်းဆုံး ၁၀၀% ကို ဖြစ်ရမှာ..။ အခုဟာက စော်စော်ကားကား..။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်..။ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေက ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ကြောင့် ကံဆိုးလို့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူတွေကို လှူတန်းတာထက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ မဟာဂုဏ်သိက္ခာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်စေတယ်..။
စဉ်းစားကြည့်ဗျာ..။ ဒီလောက် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံးနဲ့ အချိန်ပေးရေးဆွဲထားရတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကြီး” ဖြစ်သလို (အမှန်မှာ ဂိနီမှတ်တမ်းမှာ ထည့်ရမဲ့ကိစ္စ) တဖက်ကလဲ အမျှော် အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ ငွေကြေးတွေအကုန်ခံကာ စည်းရုံးရေးတွေဆင်းထားရက်နဲ့ ၉၂% တဲ့..။ ကဲ.. ဘယ် လောက် အသုံးမကျတဲ့ ဟာတွေလဲ? အဲဒီသတင်းကိုလဲကြားရော ကျုပ်တုန်လှုပ်သွားတယ်..။ “မယုံဘူး.. လုံးဝ မယုံဘူး..” လို့ အရူးတယောက်လို အော်မိတော့မလို့..။ တော်ကြာ တမျိုးထင်ပြီး လာဆွဲမှာ စိုးလို့ သာ..။ စိတ်ထဲကတော့ “မယုံဘူး.. လုံးဝ မယုံဘူး..” လို့ အခါခါအော်ပစ်လိုက်တယ်..။
တချို့မိတ်ဆွေတွေကလဲ မေးတယ်..၊ အဲဒီ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့..။ သူတို့လဲ တောက် တခေါက် ခေါက်ဖြစ်နေကြတယ်..၊ အားမလို အားမရနဲ့..။ “ဖြစ်နိုင်လား..” တဲ့..။ ကျုပ်ကလဲ ဖြစ်သင့်တဲ့အတိုင်း ပြော လိုက်တယ်..
“တကယ်တမ်းကဗျာ.. အနဲဆုံး ၁၀၀% ပဲဖြစ်ရမှာ..။ ပိုပြီးဖြစ်သင့်တာက ၁၂၅% တို့..၊ ၁၅၀% တို့ ဖြစ်ရမှာ..။ အခုဟာက မယုံနိုင်စရာဖြစ်နေလို့..။ မယုံဘူး..၊ လုံးဝ မယုံဘူး..” လို့..။
သူတို့လဲ မျက်စိလေး ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့ အံ့သြနေတဲ့ပုံစံ..။ ဒါနဲ့ ကျုပ်ကဆက်ပြီး...
“ခင်ဗျားတို့ကော ယုံလား..” လို့ မေးတော့.. သူတို့က ကျုပ်ကို မယုံသလိုနဲ့ကြည့်ပြီး မဖြေရဲဘူး..။ ဒါတောင် ကျုပ်ဘေးနားမှာ ၀ါးစိမ်းတုတ်တို့ နှစ်တလက်မချောင်းတို့ ရှိတာမဟုတ်သေးဘူး..။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်သိတာပေါ့...။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ “ဒဲ့ဒိုးပြောရင် ရပ်မိတဲ့လူစား” ပဲ ဥစ္စာ..။ ချာတိချာတာမှ မဟုတ် ပဲ..။ ကျုပ်သိတာပေါ့.. သူတို့ မျက်စိတွေကပေးတဲ့ အဖြေကို..။ ဒါနဲ့ ကျုပ်က ဆက်ပြီး..
“ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၉၂% ထောက်ခံမဲ ရတယ်-လို့ ကြေငြာခိုင်းတဲ့သူရော..။ ယုံတဲ့သူရောကို အရေးယူရမယ်..။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို အပြစ်ပေးရမယ်..။ မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ကို လုပ်ပစ်ရ မယ်..” လို့ ပြောပြီး တအောင့် နားလိုက်တော့.. တယောက်က ဖောက်ပြီး.. “ဒီတော့ကား..” ဟု ဆိုကာ စလိုက်တော့ ကျုပ်က လက်ကာရင်း…
“မှတ်ထား.. ၉၂% ထောက်ခံမဲရတယ်လို့ ကြေငြာခိုင်းတဲ့သူတွေကို သားစဉ်မြေးဆက် မသေမချင်း လေပြင်းနဲ့ တိုက်သတ်ရမယ်..။ ယုံတဲ့သူတွေကိုတော့ တသက်လုံး သားစဉ်မြေးဆက် ငရဲမှာ အရှင်လတ် လတ် ခံစေရမယ်..။ အခု ဗမာပြည်အတိုင်းပေါ့..” လို့ ဆက်ပြောလိုက်တယ်..။ သူတို့လဲ မျက်ကလူး ဆံပြာနဲ့..။ ကဲ.. ဒီတော့.. စာရှုသူ..
ခင်ဗျားကော ယုံလား..။ ဘယ်လိုလဲ တသက်လုံး သားစဉ်မြေးဆက် ငရဲမှာ အရှင်လတ်လတ် ခံချင်လား..။ မယုံမရှိနဲ့ ကျုပ်တော့ မျက်စိစုံဖွင့်ပြီး.. “မယုံဘူး..၊ လုံးဝ မယုံဘူး..” ကဲ.. မှတ်ကရော..။
(မှတ်ချက်။ ။စိုးဝင်းသေတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ ခွေးမလေးတစ်ကောင်သေတဲ့ အဖြစ် အပျက်နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ မဖတ်ရသေးသူများ “လွင်ပြင်ရိုင်းရဲ့ ရိုး သားမှုနှင့်သမိုင်းတွင်ခြင်း”ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ဒီမှာ http://lanka-msma.blogspot.com/search/label/articleဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
အမိန့်နဲ့ လက်နက်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ထားလို့သာရယ်၊ တစ်ရက်တစ်လေများး လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့ ကတော့ ကွာ” စိတ်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့နဲ့ ဘယ်သူမှ ကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူး။ စာရေးသူတို့ ရဟန်းတော်တွေဟာ “ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံး၊ ဒေသအားလုံး၊ လူကြီး၊ လူလတ်၊ လူငယ်၊ ကလေးအားလုံး” ကိုယ်စားပြုတဲ့ (ကိုယ်စားပြုနိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာရှိတဲ့) အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကို လိုလားပါတယ်။ အားလုံးဟာ တစ်သားထဲ တစ်ပြားထဲမှာရှိတဲ့ non-linear အလျားလိုက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစနစ်ဟာ အကောင်းဆုံးစနစ်လို့ ရဟန်းတော်များ ယူဆထားတယ်။ ဒီမျှတတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ စိတ်နှစ်ကြတာပါ။
ဆိုတော့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေဟာ အမိနိုင်ငံကို မတရားသဖြင့် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို အလိုမရှိကြောင်း ပြသနေရမှာပဲ။ ဒီလို ပြသတာဟာ စာရေးသူတို့ ရဟန်းတော်တွေ အနေနဲ့ အမိတိုင်းပြည်ကို ပြည်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းလို့ သဘောရပါတယ်။ မတရားသဖြင့် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို အလိုမရှိကြောင်း၊ သဘောမကျကြောင်း ပြသတာဟာ သူတော်ကောင်းတည်စေဖို့ဖြစ်သ လို သာသနာအဓွန့်ရှည်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရာလဲ ကျပါတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 9:03 PM0comments
ရာဇအိနြေ္ဒ ပျက်ယွင်းနေသော မင်းတြားကြီး
စောထွန်း | မေ ၂၉၊ ၂၀၀၈
ကျနော်ငယ်စဉ်က စစ်တပ်ဝန်းထဲတွင် နေခဲ့ရပါသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ထိုခေတ် တပ်မတော်အရာရှိ တဦး။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် က ဗိုလ်နေ၀င်း။ ပါတီတွေ ကောင်စီတွေနှင့် ဆိုရှယ်လစ်အမည်ခံဝါဒ ကြီးစိုးချိန် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ်တုန်းက ကျနော်တို့မြို့လေးမှာ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျလိမ့်မည်ဟု နယ်ခံ မိုးလေ၀သဌာနလေးက သတင်းပေးပြီ ဆိုလျင် တပ်ထဲက အိမ်ထောင်သည်လိုင်းတွေ လုံခြုံစိတ်ချရအောင် သတိပေးထားသော်ငြား ရဲဘော်များမှာ အိမ်တွင် မနေကြရ။ ကားများပေါ်မှာ stand by … ။ လေပြင်းတိုက်သည်နှင့် မြို့ထဲမှာ လှည့်ပတ်ကြရသည်။ သစ်ပင်ကျိုးသလား။ အမိုးတွေလွင့်သလား။ အစိုးရ ရုံးတွေရော တဲငယ်များသာရှိသည့် မြို့စွန်ရပ်ကွက်များမှာပါ အရေးပေါ် အကူအညီပေးဖို့ ထွက်ကြရသည်။
တခါ မီးတွေလောင်ပြန်တော့လည်း မီးသတ်ကားတွေပေါ်တက်၊ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အိမ်တွေထဲ ၀င်ဆွဲ ထုတ်ကြ၊ ပတ်လည်မှာလည်း တောကြောင်တွေ မထနိုင်အောင် ၀န်းရံကြသည်ကို မှတ်မိပါသည်။ ဒါက လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ ကျော် မဆလ ပျက်သုဉ်းခါနီးကပါ။
မနေ့တနေ့ကတော့ ကျနော်တို့အားလုံး ဘ၀မှာ မကြုံစဖူး မုန်တိုင်းဆိုသည်ကို တွေ့ကြရပါသည်။ ကျနော်သည် တိုက်ခန်း အလယ်ထပ်တစ်ခုမှာနေသူမို့ အန္တရာယ်နှင့်ဝေးသော်လည်း မအိပ်နိုင်ခဲ့။ ကလေးတွေကို အိပ်ခိုင်းပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် တညလုံးစောင့်ကြည့်ကြသည်။ မြင်ဖူးချင်တာလည်း ပါသည်။ တခုခုဖြစ်ရင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားတာလည်းပါသည်။ မသိသော ထိုတခုခု ကို အိပ်ပြီး မကျော်ဖြတ်ချင်တာလည်းပါပါသည်။
မကြုံဘူးအောင် ပြင်းထန်သော လေကြမ်းအတွင်း သွပ်မိုးတွေ စက္ကူလေးတွေလို လွင့်ပျံနေချိန်ဝယ် တချို့ တက္ကစီတွေ၊ ကားလေးတွေ သတိကြီးစွာဖြင့် မောင်းနေကြသည်ကို မပြတ်တွေ့ရသည်။ တော်တော်မနေနိုင်တဲ့သူတွေပဲ၊ မိုက်မဲတဲ့သူ တွေပဲဟု မြင်မိသည်။ သို့သော် မြို့တဘက်ပိုင်းမှာ ရှိသော မိခင်နှင့် မိသားစုကို သတိရမိသောအခါ သူတို့လည်း စိုးရိမ်စရာ လူတွေ အမျိုးတွေရှိရာ ပြေးကြရှာတာနေမှာပဲဟု စဉ်းစားမိပါသည်။
ဒီအချိန်မှာ ကျနော်ရှာမိသည်။ မတွေ့ပါ။ လုံးဝမတွေ့ပါ။ တခြားတော့မဟုတ်ပါ။ ညနေမိုးချုပ်စအချိန်အထိ တွေ့ခဲ့ရသော တရုတ်ပြည်လုပ် စစ်ကားကြီးများ၊ ဒိုင်းများ၊ တုတ်များနှင့် လက်နက်အစုံပါ စစ်တပ်များ လုံထိန်းများကိုပါ။ သစ်ပင်တွေ ပြိုလဲ၍ မြို့ပျက်ကြီးဖြစ်နေသော ရန်ကုန်ကိုမြင်ကြရသည့် နောက်တနေ့တွင်လည်း သူတို့ကို ပြန်မတွေ့ရပါ။
တွေ့ရသည်က စက်တင်ဘာအကုန်ကတည်းက လမ်းတွေပေါ်မှာပျောက်သွားခဲ့သည့် သံဃာတွေကို အစုလိုက်တွေ့ရသည်။ သစ်ပင်တွေကို စက်လွှများဖြင့် ဖြတ်သူကဖြတ်၊ သစ်ကိုင်းတွေ သယ်ပြီးလမ်းရှင်းသူကရှင်း။ ဒီထဲမှာ ဆံပင်နီကြောင်ကြောင် နှင့် Hip Hop ပုံစံကောင်လေးတွေလည်းဝိုင်းလို့ ၀န်းလို့ ပါသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျနော့်အတွေ့အကြုံကိုသတိရမိသည်။ ဘယ်လိုများဖြစ်တာပါလဲ။ အထက်က အမိန့် မရလို့ ဖြစ်မယ်ဟု ပြောသူကပြောသည်။ နောက်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်က အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်မည့် ဝေဖန်ချက်တခုကိုပေးသည်။
“ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ ဒီလို မုန်တိုင်းမျိုးတိုက်တာလို့ တို့တွေက ထင်ကြ ပြောကြတာ သာမာန်အနေနဲ့ပဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့ တကယ်ကို ယုံကြည်ကြတယ်။ မိုးသက်မုန်တိုင်းတွေတိုက် တပ်ဝန်းထဲမှာ သစ်ပင်တွေ ကျိုးကျ၊ သွပ်မိုးတွေပွင့်ထွက်တဲ့ အခါ သူတို့မှာ စိတ်လုံခြုံရာမရဘူး။ ဘုရားပဲ တနေခဲ့ကြရတာ အရာရှိကြီးကနေ တပ်သား တွေထိ အားလုံးပဲ။ ဘယ်မှာ သူများကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တို့နောက်တနေ့ ထွက်ပြီး လမ်းရှင်းဖို့တို့ စိတ်ကူးနိုင်လိမ့်မလဲ” တဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်တော့ ငလျင်လှုပ်လိမ့်မည်ဟု ကောလာဟလ တွေထွက်လာသည်။ ရယ်စရာလိုလို လူတွေက လျှောက်ပြော နေသော်လည်း အယုံကြည်ဆုံးမှာ ခေါင်းဆောင်ကြီးမိသားစုမှ သည် တပ်သားများအထိပါ။ ဒီတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ငလျင်စကားပြောတဲ့သူ ဖမ်းမည်ဟု အမိန့်ထွက်လာပြန်သည်။
မုန်တိုင်းအပြီး ညနေလောက်မှစ၍ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က သတင်းဆိုးတွေကြားလာရသည်။ မနေ့ညကတည်းက ပျောက်သွား ခဲ့သည့် တပ်တွေ ရဲတွေ ဘယ်မှာမှ မတွေ့ရသေး။ ရေဒီယိုတွေ တီဗွီတွေလည်း မရှိ။ ပြည်သူအများမှာ လေလှိုင်းထဲက လူသတ်သမားဆိုသူ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေတွေကိုပဲ အားထားကြရသည်။ သတင်းဆိုးတွေကြားတော့ ကိုယ့်ထက်ဆိုးပါလားဟု စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရသည်။ ကူညီကြဖို့ စတင်စဉ်းစားကြရသည်။
ဆီတွေ ဂက်စ်တွေဖြတ်လိုက်သဖြင့် လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မရှိတော့သည့် လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားကြရင်း ၈၈ ကျောင်းသားတို့၏ လမ်းလျှောက်ပွဲတွေကို သတိရကြသည်။ သံဃာတွေကို ကူညီရင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရှင်းကြ၊ ရေတွေ မီးတွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာကြဖွေကြနှင့် ချမ်းသာသူတို့က အစွန်အဖျားကို သွားကြည့်ရင်း ထမင်းထုပ်ဝေဖို့ လုပ်ကြပြီ။
၂ ရက်ခန့်အကြာမှာ ပြန်တွေ့ရပါပြီ။ လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ စစ်သားတွေ၊ အပွင့်တွေ အခက်တွေနဲ့ ခပ်ငယ်ငယ် ဗိုလ်လေးတွေ၊ ဗိုလ်ကြီးတွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့် ပုံသဏ္ဍန်နှင့် စည်ပင် စက်ယန္တယားကြီး ဘေးကနေ မ မ၊ ချ ချ အမိန့်ပေးနေသည်။ လုပ်နေကျအလုပ်ကို ဘေးက အမိန့်ပေးခံရသည့် ယာဉ်မောင်းသူမှာ လက်မောင်းခန့် သစ်ကိုင်းကို ကရိန်းဖြင့် မလို မရနှင့် အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းတွေ၊ သတင်းစာ စဖတ်ရတော့ ထူးဆန်းထွေလာတွေ မြင်ကြရပြန်ပါသည်။
ဘယ်နေရာမှာ ရှားရှားပါးပါး ရိုက်လာမှန်းမသိသည့် ဓာတ်ပုံတွေပါ။ သူတို့တွေ လမ်းရှင်းပေးနေကြပြီ။ အမျိုးသား သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌကြီးတို့ အစည်းအဝေးထိုင်ပြီတဲ့။ လှည့်ကြည့် နေပြီတဲ့။ အားရဖွယ်သတင်း တွေ။ ဒီအချိန် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရေစပ်စပ်မှာ မသေဘဲ မျော့မျော့ ကျန်ရစ်သူ လူ တသောင်းလောက် ကယ်သူမရှိ၍ ထပ်မံ သေဆုံးကုန်ကြလောက်ပါပြီ။
မုန်တိုင်းမကျမီ ညဦးက ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံက ကန့်ကွက်မဲပေးစို့ သီချင်းတွေကိုဆို၊ သင်္ကြန်သီချင်း အလိုက်မို့ သမီးငယ် ပျော်ရွှင်စွာ ကသည်ကို ကြည့်ရင်း အားတက်နေခဲ့သည့် ကျနော် အပါအ၀င် မြန်မာတွေအားလုံး ဆန္ဒမဲပေးဖို့ ရက်ကို မေ့နေကြပါပြီ။ စိတ်လည်းမ၀င်စားကြတော့ပါ။ ခုလိုအချိန် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျခဲ့သည်မှာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး မလုပ်တတ်သဖြင့် ညံ့ဖျင်းလှသည်ဟု အပြောခံခဲ့ရသည့် တပ်မတော်အတွက် ကြီးစွာသော အခွင့်အရေးပင် ဖြစ်သည်။
နေရာအနှံ့သွားနိုင်သော စစ်သားတို့ အတွေ့အကြုံ အလေ့အကျင့်၊ အလုပ်ကြမ်းကို တသက်လုံးကျင့်သားရနေသည့် သူတို့၏ အားမာန်သည် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ရှင်းလင်း တည့်မတ်ရေးတို့တွင် တခြားသူတွေထက် အပုံကြီးသာသည်။ အစိုးရငွေ တပြား တချပ် သုံးရန်မလို၊ ပြည်ပနှင့် စေတနာရှင်တို့၏ အလှူကို လက်ရောက်အောင်ပို့ပေးရင်း ဒုက္ခသည်တွေရှိရာ အစွန်အဖျားကို သွားစောင့်ရှောက်ပေးရုံမျှနှင့် ကြက်ခြေခတ်ရန် တာစူနေသည့်သူများ သူတို့ဘက် ပါသွားမည်သာဖြစ်သည်။
စစ်သားဆိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကဲ့သို့ ၀လင်နေသူများ မဟုတ်သဖြင့် အလှူ့လက်ဖက်ကို ကိုယ်လည်းစား၊ ခိုးထုတ် ပြီးလည်း ရောင်းရုံနှင့်တော့ အထူး နာမည်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ရောက်သင့်သည့် နေရာကို ၈၀ ဖိုးရောက်ခဲ့ပါက ၂၀ ဖိုး ခိုးယူခြင်းအတွက် ပြောမည့်သူ မများလှပါ။ ခုတော့ဖြင့် သူတို့၏ ခြေလှမ်းတွေမှာ ထူးခြားလွန်းလှပါသည်။ အရာရှိတိုင်းကို ထိုင်းဆန် ၁၂ ပြည်စီ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဒုက္ခသည်များကို ဆန်ကွဲဝေခြင်းတို့သည် သူတို့ ရေးဆွဲသည့် အခြေခံဥပဒေပါ “စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်း တာဝန်အရဆောင်ရွက်ခြင်း” အဖြစ် နောင်အခါ အရေးယူ တရားစွဲခံရမှုမှ လွတ်ကင်းသည့် သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။
သန်းပေါင်းများစွာ အကူအညီကို တက်တက်ကြွကြွ လက်ခံကာ မိမိ တပ်ဖွဲ့ များအတွက် မသိမသာ အမြတ်ထုတ်လျင် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အမြတ်များစွာရနိုင်ပါလျှက် မရှက်မကြောက် ခိုးဝှက်ကြသည်။ ပြည်သူပြည်သားတို့အပေါ် မစ္ဆရိယ ထားခဲ့ကြသည်။ ၂ ရက်ခန့် မစားဘဲနေနိုင်သည့် စွမ်းအားမြင့် ချောကလက်ကို ၂ တောင့် ၃ တောင့် ဆက်တိုက် ခိုးစားရင်း သူတို့သားသမီးတွေ ဆေးရုံပို့ကြရသည်ဆိုသော သတင်းမျိုးတွေ ကြားလာကြရသည်။
ဖြစ်ချင်တော့ တရုတ်ပြည်မှာ ငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လုံးဝ ကွဲပြားသော စွန့်စားမှု၊ စွန့်လွှတ်မှု၊ အားကိုးရမှုတို့ကို တရုတ်ပြည်သူ့တပ်မတော်နှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အစိုးရက ပြသခဲ့သည်။ မျက်ရည် ကျဖွယ် စွန့်လွှတ်ကူညီမှုများကြောင့် အစိုးရနှင့် ရန်စစ်ဖြစ်နေဆဲ တိဘက်တို့သည်ပင် ငြိမ်းချမ်းရေး အလံပြကြသည်။ တရုတ်အိုလံပစ်အပေါ် ဆန့်ကျင်မှုများ တခန်းရပ်ကြဖို့ ညွှန်ကြားရသည်အထိ သူတို့ အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
တခြားတနေရာတွင်ဖြင့် ၀ိုင်းပြောနေသည့်ကြားက မဲပေးပွဲကို ဇွတ်ပင်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ စိတ်မပါခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကန့်ကွက်မိလျင် အငြိုးခံရမည်ကို ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မန္တလေးလို မြို့တွင်ပင် တစ်ဝက်မျှ မဲလာမပေး ကြပါ။ အလွန်ကောင်းပါသည်။ မလာသူအားလုံးကို မဲစာရင်းအတိုင်း ထောက်ခံမဲ ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် မဲကိုဇွတ်လိမ်ရန် သိပ်မလိုတော့ပါ။
ဒီအချိန်မှာ မြန်မာခေါင်းဆောင်ကြီး လမ်းပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ၁၀ ရက်ကျော်အကြာ အသေအပျောက် စာရင်း ၃၅၀ မှ ၇၀၀၀၀ သို့ တိုးပြလိုက်ချိန်နှင့် အချိန်ကိုက်ပါသည်။ အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ် သင်္ဘောတွေကို ခံတိုက်ဖို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို လှည့်ကြည့်သည်။ တပ်တွေကို ဘယ်သူတက်လာလာ ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးပြီး ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ ပြင်သစ်သင်္ဘောကို မြင်သည့် အခါ တုန်လှုပ်သွားပါတော့သည်။ အာဆီယံကို အပြေးဦးတိုက်သည်။ မနေ့တနေ့က မျက်နှာပျက်ခံ ငြင်းဆိုထားသည့် ထိုင်းကို အချိုသတ်သည်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမှလာ၍ လွန်စွာ ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သော သူ၏ဗျူဟာအတိုင်း ခေါင်းညိတ်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း ခေါင်းခါပြသည့် လမ်းစဉ်ကို စတင်ကျင့်သုံးတော့သည်။
နောက်တော့ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသည့် နယ်မြေတွင်ပင် ဆန္ဒမဲပေးစေခဲ့သည်။ ဆင်ဟွာကဲ့သို့ သတင်းဌာန မျိုးကပင် အံ့သြဖွယ်အဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့ကြရသည်။ မည်သည့် အခြေခံဥပဒေတွင်မဆို အဆိုပါဒေသမျိုးတွင် လွတ်လပ်သောမဲ မရနိုင်ကြောင်း ပါရှိကြသည် ဆိုသော်ငြားလည်း (ယခုဖွဲစည်းပုံသစ်တွင် ပါ၊ မပါ ကျနော် သေချာမသိပါ) ချုပ်နှောင်ထားတာ ၅ နှစ်ပြည့်၍ ပြန်လွှတ်ရတော့မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထွက်မလာမီ အပြီးသတ် ကြေညာလိုက်တော့သည်။
သို့သော်လည်း သူတို့၏ ဥပဒေနှင့် မဲစာရင်းတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေကြောင်း၊ မခိုင်မာသေးကြောင်း သတိပြုမိသည့်အခါ ဥပဒေကို မကြည့်တော့ဘဲ ချုပ်နှောင်သက်တမ်းကို မျက်စိမှိတ်တိုးလိုက်ပါသည်။
ဤမျှဖြစ်နေစဉ်မှာပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ စဉ်းစားနည်းမှာ အံ့သြဖွယ်။ လူတိုင်းက ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် လယ်တွေ ပြန်ကောင်းဖို့၊ မုန်တိုင်းဒီရေအတွက် ဘင်္ဂလားပြည်မှာကဲ့သို့ တက်ပြေးစရာ အဆောက်အဦမြင့်များ ဆောက်ဖို့၊ infrastructure နှင့် mitigation အတွက် အမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေချိန်မှာ နောက်နောင် အမေရိကန်လာလျင် သူပိုင်နိုင်သည့် ကြည်းတပ်ဖြင့် ခုခံနိုင်စေရန်အတွက် လမ်းမ အမြင့်ကြီးများ ဆောက်ဖို့ ဘီလျံဒေါ်လာ အကူအညီများ တောင်းခံရှာသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးမှလွဲ၍ မျက်မှောက်ခေတ် အမေရိကန်သည် အလုံးအရင်းဖြင့် ကမ်းမတက်တော့ကြောင်း သူမသိ။ စစ်တိုက် လိုလျင် မိမိလိုသော ပစ်မှတ် ကို ဗုံးမိုးချပြီး အတန်ကြာမှ အီရတ်သို့ ၀င်ခဲ့သည်ကိုလည်း သတိမထားမိ။ ယိုင်နဲ့လာသော စည်းစိမ်အာဏာ လုပ်ချင်ရာအတွက် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါ။ ဇာတ်ဆန်ဆန်ပြောရလျင် သူသည် ရာဇအိနြေ္ဒ ပျက်ယွင်း နေပေပြီ။ ။
ုThe Errawaddy မှတင်ပြသည်။